अमेरिकाले दियो एमसीसीभन्दा ठूलो सहायता, कहाँ खर्च हुँदै छ ८० अर्ब? – Annapurna Post News
April 15, 2022 April 15, 2022 sujaLeaveaComment on अमेरिकाले दियो एमसीसीभन्दा ठूलो सहायता, कहाँ खर्च हुँदै छ ८० अर्ब?
सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (१८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार्ने लिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो सहायता योभन्दा अघि पुनर्निर्माण क्षेत्रमा समेत आएको थियो। तर यति ठूलो रकम भने थिएन।यो सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।बुधबारको बैठकले नै विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १ सय ५० मिलियन अमेरिकन डलर (१८ अर्ब) सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सहुलियत दरको यो ऋण सरकारले तत्काल पाउनेछ।
मृत्यु भएकाको बर्षौदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खाएको खुलासा